विभिन्न घटनामा परि दाङमा तीन... :: अशेष अधिकारी :: Setopati
विभिन्न घटनामा परि दाङमा तीन बालबालिकासहित चारको मृत्यु
नारायण खड्का दाङ, बैशाख १
दाङमा विभिन्न घटनामा परि तीन बालबालिकासहित चारजनाको मृत्यु भएको छ । शनिवार दिउँसो राप्ती गाउँपालिका वडा नं. ४ श्रीनारायण चोकमा को २ च ७५१ नं.को जीपको ठक्करबाट ६ बर्षीय सुदन नेपालीको मृत्यु भएको छ ।
गम्भीर घाईते स्थानीय बालकलाई उपचारका लागि लमही अस्पताल तर्फ लैजाने क्रममा दिउँसो २ बजेतिर बाटो मै मृत्यु भएको ईलाका प्रहरी कार्यालय भालुवाङका प्रमुख रविन्द्र खड्काले जानकारी दिए । जीप पश्चिमवाट पूर्वतर्फ जाँदै गर्दा बालक नेपालीलाई ठक्कर दिएको थियो ।
त्यस्तै जिल्लाको राजपुर गाउँपालिका वडा नं. ६ गम्दीखोलामा डुवेर ५ बर्षीया नैना भण्डारी मृत्यु भएको छ । बालिका खेल्ने क्रममा शनिवार दिउँसो २ बजेतिर खोलामा डुब्न पुग्दा मृत्यु भएको प्रहरीले बताएको छ । शुक्रवार बेलुका मात्रै थप एकजना बालकको खोलामा डुवेर मृत्यु भएको थियो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय घोराही दाङका प्रवक्ता एवं डिएसपी रामप्रशाद घर्तीका अनुसार जिल्लाको गढुवा गाउँपालिका वडा नं. ६ मठुर खोलामा डुब्न पुग्दा १० बर्षीय अभिशेक यादवको मृत्यु भएको हो । यादवको घर नजिकैको खोलामा नुहाउने क्रममा डुवेर मृत्यु भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
त्यस्तै शनिवार विहान दाङमा भएको सवारी दुर्घटनमा परि थप एकजना युवकको मृत्यु भएको छ । घोराही वसपार्कको वरालोमा पानी बोक्ने ट्याङकरको ठक्करवाट स्कुटी चालक २६ बर्षीय प्रेम रोकाको मृत्यु भएको हो । ट्याङकरको ठक्करवाट गम्भीर घाइते घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १३ बडरा निवासी रोकालाई राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल पु¥याए लगतै चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए ।
जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता घर्तीका अनुसार शनिवार विहान नौं बजेतिर घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १४ बसपार्क जाने वरालोमा पानी बोकेको लु २ च ९३१२ नम्वरको ट्याङकरले रोका सवार रा २ प ४४९२ नम्वरको स्कुटीलाई ठक्कर दिदा उक्त दुर्घटना भएको हो ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, वैशाख १, २०७५, ०८:५५:४३